पीडा कास्टिङ काउचको — News of The World
पुष्पलाल पाण्डेबैशाख ७, २०७५
“संघर्षको त्यो समयमा निर्माता, निर्देशक र नायकका सबै जायज या नाजायज सर्त स्वीकार गर्नुको विकल्प नै थिएन” नेपाली सिनेमाकी एक समयकी चल्तिका नायिकाको स्वीकारोक्ति हो यो । आफ्नो नाम नलेख्न आग्रह गर्दै ऐक्यबद्धतालाई उनले नेपाली रजतपटमा ‘कास्टीङ काउच’ का विविध आयामहरूका बारेमा समेत सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न भ्याइन् ।
नेपाली सिने क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा स्वीकार नगरिएको तर, अनौपचारिक रुपमा धेरैले भोगेको विषय हो ‘कास्टिङ काउच’ । हामीले समाचार तयार पार्ने क्रममा हाल चल्तिमा रहेका देखी पुराना नायिकाहरूसँग सम्वाद गर्यौ । ती मध्ये धरै नायिकाहरूले आफू ‘कास्टीङ काउच’ को शिकार भएको बताएका छन् । तर, सामाजिक र पारिवारिक कारण नेपाली नायिकाहरू खुलेर बोल्न भने नसक्ने बताउँछन् । पछिल्लो समयका नवनायिकाहरू केही खुल्न थानेपनि पुराना नायिकाहरू भने यो विषयमा खुल्न नसक्ने बताउँछन् ।
के हो ‘कास्टीङ काउच’ ?
विकिपेडियाका अनुसार-‘रोजगार दाताले रोजगार प्राप्त व्यक्तिसँग रोजगारी दिएवापत यौनसम्पर्कको माग गर्नु ‘कास्टीङ काउच’ हो । प्राय चलचित्र उद्योगमा यो शब्दको बढी प्रयोग गरिन्छ ।’
विकिपिडियाले भने जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा ‘कास्टीङ काउच’ धरै हुने विभिन्न समाचारहरूले जनाएका छन् । हलिउड, बलिउड र कलिउड सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा यो समस्या रहेको यस क्षेत्रका हस्तीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
हलिउड की जेनिफर लोपेजदेखि बलिउड कि प्रियंका चोपडा समेत आफू ‘कास्टीङ काउच’ को शिकार भएको स्विकार गरेका छन । नेपाली सिनेमाका नायिकाहरूले ‘अफ द रेकर्ड’ यो मामिला स्वीकार गरेपनि नाम नलेख्न आग्रह गर्न भने छुटाउँदैनन् । तर नवनायिकाहरूको भने खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । सन् २० को दशकबाट हलिउडमा भित्रिएको भनिएको ‘कास्टीङ काउच’ अहिले आएर व्यापक बनेको छ । विशेषत मनोरञ्जन क्षेत्रको एउटा पाटो नै मानिएको यो समस्या रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा समेत रहको भेटिएको छ ।
ओस्कार बिजेता नायिका देखि मनोरञ्जन क्षेत्रमा भविष्य खोज्न दौडीएका धेरै सुन्दरीहरू ‘कास्टीङ काउच’को शिकार भएको मानिन्छ । खासगरी संघर्षको चरणमा रहेका नायिका तथा मोडेलहरूलाई काम दिए बापत ‘सेक्स अफर’ धेरै हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘कास्टीङ काउच’ सुरुको चरणमा सहरदेखि टाढा एकान्तमा निर्माण गरिने नाट्यशालामा हुने ‘सेक्स’ सँग सम्बन्धित भएपनि समय परिवर्तन भएसँगै यसको स्वरुपमा समेत परिवर्तन भएको छ । हलिउडमा यस विषयमा थुप्रै चलचित्र समेत बनीसकेका छन् ।
२० र ३० को दशकमा हलिउडमा मनोरञ्जन क्षेत्रका शक्तिशाली मान्छेको ओछ्यान नबनी चलचित्रमा कुनै भूमिका नै पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भैसकेको थियो । यहि समस्यालाई देखाउन ‘कास्टीङ काउच’ भन्ने चलचित्र नै बनेको देखिन्छ । सन् १९२४ मा बनेको यस चलचित्रले ‘क्यारीयर’को सुरुवाती चरणमा नायिकाहरू निर्माता, निर्देशक र यस क्षेत्रका अन्य शक्तिशाली पुरुषको खेलौना बन्न बाध्य हुन्छन् भन्ने देखाएको छ ।
हलिउड हँुदै बलिउड को बाटोबाट कलिउडमा ‘कास्टीङ काउच’ छिरेको नेपाली सिनेकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली सिनेमा पनि ‘कास्टीङ काउच’ बाट अछुतो नरहेको मनोरञ्जन पत्रकार तथा अन्य भूक्तभोगीहरू पनि बताउँछन् ।
सन् १९२० मा फोटोप्ले म्यागाजिनले सुरुमै थान विषयमा विस्तृत र खोजमुलक समाचार समेत प्रकाशन गरेको देखिन्छ । उक्त समाचारमा ‘कास्टीङ काउच’ लाई सीने क्षेत्रको नकारात्मक पाटोको रुपमा चीत्रित गरिएको छ ।
नेपाली सिनेमामा ‘कास्टीङ काउच’
‘‘अहिलेको मेरो सफल उचाइ र हसिलो मुहारभित्र त्यो बेलाको खोल्न नसकिने पिडा लुकेको छ’’ नेपाली सिनेमाकी ‘लिडीङ्ग हिरोइन’को सहज स्वीकारोक्ति हो यो । उनी भन्छिन्, ‘‘त्यो समयको ‘रिल लाईफ’ को कल्पनामा रहेकी मलाई रियल लाईफको त्यो भोगाइले कहिले छोड्ने छैन ।’’
नेपाली सिनेमामा ‘कास्टीङ काउच’ कहिलेबाट भित्रियो ? यसको प्रमाणित तथ्य त भेटाउन सकिएन । तर, यस क्षेत्रमा सुरु देखि नै समस्या रहेको स्वीकार गर्दिछन् एक चर्चित नायिका । चलचित्रको ग्ल्यामर र चर्चाको नसाले धु्रत भएका कैयाँै किशोरी तथा वयस्क महिलाहरू
‘काष्टीङ काउच’ को शिकार भएको मानिन्छ ।
नेपाली समाज अलि बढी बन्द भएकाले तमाम पीडितहरू यो समस्या लिएर बाहिर आउन नसकेको समाजशास्त्री सरु पोखरेल बताउँछिन् । ‘काष्टिङ काउच’ वास्तविक समस्या हो म समेत यसको शिकार भएकी छु– एक चर्चित नायिकाले ऐक्यबद्धतासँग स्विकार गरेकी छन् ।
तर, नेपाली सिनेमाको क्षेत्र असाध्यै साघुरो भएकोले भविष्यको डरले धेरै महिला कलाकार सार्वजनिक रुपमा खुल्न नसकेको उनको अनुभव रहेको छ ।
तर, पछिल्ला समयमा प्रमिला न्यौपाने नाम गरेकी उदयपुरकी एक मोडलले आफूलाई निर्माता निर्देशकहरूले काम दिए वापत ‘सेक्स प्रपोज’ गरेको बताएकी छिन् । विभिन्न म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी न्यौपानेले आफूलाई विदेशमा हुने ‘सो’ का लागि त्यहाँ जान शारीरिक सम्बन्ध राख्नै पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मलेसियामा सात दिनको कार्यक्रममा जानका लागि आफूलाई सेक्स प्रपोज गरिएको उनको आरोप छ । फेब्रुअरी १५ देखि हुने उक्त कार्यक्रममा भाग लिनका लागि निर्देशक प्रकाश योगीले आफूलाई ‘सेक्स प्रपोज’ गरेको उनले बताएकी छिन् ।
यसअघि सानो पर्दामा चर्चित हास्यकलाकार प्रकाश ओझाले समेत यसैगरी एक नायिकाको यौन शोषण गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । त्यसबेला ओझाले संघर्षरत नायिका जेनिसा खड्काको यौन शोषण गरेको भिडियो समेत बाहिर आएको थियो । पछि त्यस्तै विभिन्न कारणले नै उनले आत्महत्या गरेको आशंका समेत गरिएको छ ।
“यस्तै पछिल्लो समयमा ‘सायद–-२’ नामक चर्चित चलचित्रका निर्माता सुनिल रावलले नायिका स्यारोना श्रेष्ठलाई ‘सेक्स अफर’ गरेको आरोप नायिका श्रेष्ठले लगाएकी छन् ।
नेपाली सिनेमामा समेत ‘कास्टीङ काउच’ व्याप्त रहेको यी दृष्टान्तहरूले बताउँछन् । यीनै विषयलाई लिएर छोटो चलचित्र ‘कम्प्रोमाइज’ समेत बनाइएको छ । यी बाहेक नेपाली सिनेमामा श्रीषा कार्की, सुरवीना कार्की, सुजना ढकाल र अस्लेषा ठकुरी समेत ‘कास्टीङ काउच’को शिकार भएको बताइन्छ । सुरवीना कार्कीको अस्लिल भिडियो समेत बाहिर आएको छ, भलै उनले यसलाई नकारी रहेकी छिन् । नायिका अस्लेसा ठकुरीको भित्रि वस्त्र विनाको तस्विर उनलाई बल्याक मेल गर्ने उद्देश्यले नै बाहिर ल्याइएको उनले आरोप लगाएकी छिन् । यस्तै भारतको गोवामा रहेकी नायिका सुजना ढकालकोनग्न तस्विर पनि ‘कास्टीङ काउच’ कै माध्यमबाट बाहिरीएको उनको आरोप छ । नसामा धुत भएको अवस्थामा उनको नग्न नस्विर बाहिर आएपछि ढकालले आफ्नो मोबाइल हराएको र सोही मोबाइलबाट उक्त तस्विर कसैले बाहिर ल्याइदिएको बताएकी छिन् ।
‘कास्टीङ काउच’को झलक ‘विर्खेलाई चिन्छस’ भन्ने चलचित्रकी नायिका आयुसा राईको खुलासाबाट पनि भएको छ । निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाले आफूलाई सेक्स अफर गरेको खुलासा नायिका राईले फेसबुक स्टाटसबाटै गरिन् । मोडलिङ्ग र फिल्मी क्षेत्रलाई मोजमज्जा र हल्लाको क्षेत्रको रुपमा बुझ्नेहरूका कारण यो क्षेत्र बदनाम भएको चलचित्र पत्रकार तथा गीतकार दयाराम पाण्डेको बुझाइ छ । चर्चित टेलिश्रृङ्खला तितो सत्यको ‘सिग्नेचर’ गीत लेखेका पाण्डे यो क्षेत्रलाई आफूमा रहेको कला देखाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक बुझ्ने क्षेत्र बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
प्रमिला न्यौपाने र आयुषा राईले जस्तै दृढतापूर्वक आफ्ना समस्या बाहिर ल्याउने आँट सबै नायिकाहरूले गरे यो समस्या स्वतः कम हुने पत्रकार सन्ध्या थापा बताउँछिन् ।
‘कास्टीङ काउच’को कारण ग्ल्यामर
चलचित्रमा भाग्य आज्माउने नाउमा जस्तो सुकै सम्झौता गर्ने बानीले यो क्षेत्रका शक्तिशाली पुरुषहरूले महिलाहरूलाई खाली भोग्या मात्रै सोच्ने गर्छन् । एकातिर निरन्तर रुपमा रुपवान र नौजवान युवतीहरूको यस क्षेत्रमा प्रवेश र सिंगो फिल्मी क्षेत्र पुुरुष नियन्त्रित भएकाले महिला कलाकार बाध्यताको शिकार भएको सीने पत्रकार थापाको बुझाई छ ।
हलिउड, बलिउड र कलिवुड सबैमा पुरुष प्रभुत्व रहेको र महिला कलाकार समेत सम्झौता मुखी भएका कारण ‘काष्टीङ काउच’ समस्या बढी भएको थापाले बताइन् । नेपाली सिने क्षेत्रमा पनि यो समस्या भयावह रहेको फिल्म क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीने क्षेत्रको चमक धमक देखेर यसमा आफ्नो भाग्य खोज्न निस्केका महिला कलाकारहरू सुखद् भविष्यका लागि यसमा फसिसकेका हुन्छन् । जहाँ निस्कन भन्दा भासीनै सहज हुन्छ । त्यहि भासले गर्दा प्रतिरोध क्षमता समेत गुम्दै जाँदा सम्झौता मुखी हुनुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ ।
प्रतिरोध गर्दा आफूले प्राप्त गरेको सम्मान र चमक धमकपूर्ण जीवनबाट एकैपटक सडकमा आउनु पर्ने डरका कारण पनि आफू यसको शिकार भएको बताउन नायिकाहरू तयार हुदैनन् ।
प्रोनोग्राफीको विउ ‘काष्टीङ काउच’
विभिन्न समाचार संस्थाहरूले गरेको खोजले ‘प्रोनोग्राफी कन्सेप्ट’ नै ‘काष्टीङ काउच’ बाट आएको बताएका छन् । सिनेमाग्राफिको एक सिनका लागि समेत नायिकाहरूलाई आफूसँग सुत्न बाध्य पारेका निर्माता निर्देशकहरूले तीनै तस्बिर बाहिर ल्याउदै नायिकाहरूलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ्ग’ गरेका थुप्रै दृष्टान्त रहेको अनलाइनहरूले जनाएका छन् । पछि तीनै नायिकाहरू प्रोनोग्राफीतिर लागेको बताइन्छ । सिने पत्रिका लाइफ स्टाइलका अनुसार सेक्सका लागि बाध्य पारिएका महिलाहरूनै पछिल्लो समयका पोर्न स्टार भएका छन् ।
अछुतो छैन वलिउड
काष्टीङ काउचबाट वलिउड पनि अछुतो छैन । यो समस्या खाली हलिउडको मात्रै होइन अब त ‘डर्टी गेम’ को रुपमा दुनियाँका सबै पेशा व्यवसायमा समेत काष्टीङ काउच प्रवेश गरिसकेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।
भारतको चर्चित पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सकी पत्रकार ज्योती शर्माका अनुसार भारतीय सिनेमामा बलत्कारका सीन राख्नुका पछाडि निर्माता निर्देशकहरूको काष्टीङ काउच कै मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ । कुनै समयका चर्चित नायिका रेखा र माधुरी दीक्षित समेत यसको शिकार भएको स्वीकार गरेको शर्माले बताएकी छिन् ।
कूलजित सिंह पाल जस्ता निर्माताले रेखालाईसमेत आफूसँग सुत्न दबाब दिएको भारतीय मिडियामा रेखाले बताएकी छन् । यस्तै विभु विनोद चोपडाले ‘खामोस’ नामक चर्चित चलचित्रका लागि माधुरीलाई यस्तो आग्रह गरेका थिए । सो आग्रह नमान्दा उनको सीन नै काटिएको माधुरीले बताएकी थिइन् ।
यसैगरी एनडिटिभी टेलिभिजनमा सोनिया सिंह सँग कुरा गर्दै अहिलेकी ‘हट एण्ड हिट’ नायिका प्रियंका चोपडाले समेत आफू कयौँ पटक कास्टिङ्ग काउचको शिकार भएको बताएकी छन् । निर्माता निर्देशकका गलत मागहरूलाई बेबास्ता गर्दा उनले कयौँ चलचित्रबाट निकालिनु परेको समेत स्विकारेकी छन् ।
यी बाहेक पछिल्लो समय ‘पद्मावती’ नामक चर्चित चलचित्रका निर्देशक सन्जय लीला भंसालीलाई चिठी लेखेर चर्चामा आएकी स्वारा भास्वरले समेत ‘कास्टीङ काउच’ को शिकार भएको बताएकी छन् । उनी बाहेक एक जमानाकी चर्चित नायिका ममता कूलकर्णीले ‘चाइना गेट’ चलचित्रको सुटिङ्गमा निर्देशक राजकुमार सन्तोषीले आफूलाई ‘सेक्स अफर’ गरेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन् ‘सन्तोषीको अफर नमान्दा उनको ‘सिन’ नै घटाइएको थियो ’। यस्ता अनैतिक काम गर्नु भन्दा फिल्म उद्योग नै छोड्नु बेस भन्दै उनी यस क्षेत्रबाट टाढै बसेको भारतीय मेडियाहरूले जनाएका छन् ।
‘कास्टीङ काउच’को फन्दामा भारतीय सीने क्षेत्रका थुप्रै नायिकाहरू परेको बताइन्छ । सिल्पा सिन्धे, सर्लिन चोपरा र पायल रोहतगी समेत निर्माता निर्देशकको चंगुलमा फसेको स्वयं स्विकार गरेका छन् । पायलले त दिनाकर बनर्जीले आफूलाई उनीसँग सुत्न बाध्य पारेको बताएर भारतीय फिल्म क्षेत्रमा सनसनी नै मच्याएकी थिइन् ।
हलिउड ‘काष्टीङ काउच’को खानी
चलचित्र समिक्षक क्यारी रेक्की भन्छन् –बाहिरबाट देखिने चमक धमकपूर्ण हलिउड भित्र भने शोषणको खानी हो । उनका अनुसार हलिउड महिला कलाकारका लागि ‘ल्याण्ड माइन’ माथि बसेर हाँसेजस्तो हो ।
हलिउड समालोचकहरूका अनुसार ‘यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँ सबैजना नाम र दामका लागि शरीर र आत्मा दुवै बेच्न तयार हुन्छन् ।” इतिहास तिर फर्केर हेर्दा सन् १९२१ मा पहिलोपटक हलिउडका मीलेनियर डलर नायक रोसेलाई भर्जिनिया रेपले ‘काष्टीङ्ग काउच’ को अफर गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनलाई रोसेले आफूसँग सुत्न बाध्य पारेको उक्त आरोपसँगै हलिउडमा ‘काष्टीङ्ग काउच’ ले व्यापकता पाएको बताइन्छ ।
भर्जिनिया सँगै हलिउडमा ‘कास्टीङ काउच’को शिकार हुने महिला कलाकारको ‘लिष्ट’ पनि बढ्दै गएको छ । ७० को दशक अगाडि सम्म त्यतिबेलाका चर्चित नायिका देखि नवप्रवेशी सुन्दरीहरू धेरैले आफू कुनै न कुनै कोणबाट निर्माता निर्देशकको यौन शोषणमा परेको बताएका छन् । चर्चित नायिका क्याण्डी न्युटन, जुली ग्रालेन्ड, हेलेन मीरन जस्ता नायिकाहरूले त्यतिबेला खुलेरै आफूहरू ‘कास्टीङ काउच’ को पिन्जडामा परेको बताएका थिए ।
चर्चित सुन्दरी नायिका सर्ली टोम्यलले त आफूलाई निर्माताले १२ वर्षकै उमेरमा उनीसँग सुत्न बाध्य पारेको भनेर सनसनी मच्याएकी थिइन् । सार्ली बाहेक जुलिया फिलिप्स र चार्लिज चीरोनले पनि १८ वर्षकै उमेरमा निर्देशकको ओछ्यानमा पुग्नु परेको बताएका थिए । पछिल्लो समयका सफल मानिने मेगान फक्स, एसीया अजेन्टो र रोस म्याक्गाउन पनि निर्माता निर्देशकको कोपभाजनको शिकार भएका नायिकाहरू हुन् । यस्तै निर्माता निर्देशक बाहेक टेलिभिजन प्रस्तोताहरूले पनि विभिन्न बहानामा यौन शोषण गर्ने गरेको दृष्टान्त बनेका छन् । नायिका ग्राथन कार्लेसनले उनलाई फक्स न्यूज टिभी प्रस्तोता रोजर रमीक्सले २०१६ मा ‘सेक्स अफर’ गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
विश्लेषक उडि हार्सनलाई मान्ने हो भने त न्यूयोर्क स्वयम् ‘कास्टीङ काउच’ हो । उनी भन्छन् ‘यहाँका धेरै महिला आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्न अनिच्छापूर्वक अरुसँग सुत्न बाध्य हुन्छन् ।
हलिउडलाई हार्वो बीनष्टन काण्डले त झनै तताएको छ । मीराम्याक्स प्रोडक्सन हाउसका ६५ वर्षे मालिक हार्वे विम्सटनलाई ३२ महिलालाई चलचित्रमा खेलाउने नाममा आफूसँग सुत्न बाध्य पारेको आरोप लागेको छ । उनले लिजा क्याम्पबेल, ऐन्जोलिना जोली, आभ्रा बाटीलिनालाई समेत सेक्स अफर गरेका थिए ।
यीनै र यस्तै कारणले होला लरेन ओ करनर भन्छन्– हलिउड यस्तो विषालु कुनो हो, जहाँ हरेक महिला कलाकार त्यो विष पिएर बाँच्न विवश छन् ।
अन्य क्षेत्रमा पनि ‘काष्टीङ काउच’
‘कास्टीङ काउच’ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मात्रै सिमित छैन । हामीले बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रका महिलासँग पनि कुरा गरेका थियौं । जागिरलाई स्थायी गरिदिन वा प्रमोसन गरिदिने देखि जागिर लगाइदिन समेत केही शक्तिसाली पुरुषले महिलासँग सेक्स अफर गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
हाम्रो सामाजिक अवस्था र सेक्स प्रतिको सोँचका कारण उनीहरू खुल्न नसकेपनि ‘अफ दि रेर्कड’ आफ्नो पीडा भने बताउन तयार हुन्छन् । चर्चित निजी बैंकको राम्रो तहमा पुगेकी एक महिला भन्छिन्–हाम्रो जस्तो पुरुष नियोजित समाजमा यौनमा समेत पुरुषकै अधिकार रहने भएका कारण आम पीडित खुल्नै सक्तैनन् । आफू समेत यसको शिकार भएको स्विकार्ने ती महिला अब खुल्नु पर्ने बेला भएको समेत बताउँछिन् ।
मिया विवी राजी तो क्या करे काजी
‘कास्टीङ काउच’को विषय सबैभन्दा पहिला ठोक्कीने नै निर्माताहरूसँग हो । त्यसैले तपाईले ठिक ठाउँमा प्रश्न लगाउनु भएको छ । मेरो व्यक्तिगत सवालमा यो समस्या छैन । तर, मेरो पेसामा यो समस्या रहेको छ ।
पेसागत मर्यादाको हिसाबले यो पटक्कै राम्रो होइन । यस्ता कर्मलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले यस उद्योगमा आउन चाहने युवतीले आफूलाई कलात्मक हिसाबले निखारेर आउनुपर्छ ।
जब आफूमा कामलाई न्याय गर्ने कला छ भने अन्य सम्झौता गर्नै पर्दैन । विश्वास र साहस छ भने यस्ता झमेलामा फस्न पनि पर्दैन । त्यसैले रुपको भरमा यस क्षेत्रमा आउने कला नभएका युवतीहरू बाध्यताबस यस्तो समस्याको शिकार भएका छन् ।
अर्कातर्फ माग आपूर्तिको समन्वयमा बजार मुल्य निर्धारण हुने मान्यता भन्दा बढी आपूर्तिका कारण पनि यो समस्या र्सिजना भएको छ । सँगसँगै मिया विवी राजी तो क्या करेगा काजी भने जस्तै दुवै पक्ष केही पाउन केही गुमाउन तयार हुँदा पनि यो समस्या आएको हो ।
मलाई निर्देशकले ‘सेक्स प्रपोज’ गरे
‘कास्टीङ काउच’ पीडित नायिका
मलाई निर्देशक प्रकाश योगीले घुमाउरो पाराले ‘सेक्स प्रपोज’ गर्नु भयो । मलेसियाको ७ दिने सोमा जाने तयारी भइरहेको थियो । एक दिन उहाँले कफिको अफर गर्नुभयो । म पनि तोकिएको समयमा उहाँले बोलाएको ठाउमा पुगे ।
मलेसियामा भ्रमणको कुरो हुँदै थियो उहाँले मैले तिमीलाई मलेसिया लग्छु ७ दिनको कार्यक्रम छ । अरु सात दिन हामी घुम्नु पर्छ भन्नुभयो म एकदम ‘एक्साइटेड’ भएँ । तर, मेरो त्यो एक्साइमेन्ट लामो समय टिकेन । उहाँले घुमाउरो पाराले मलाई ‘सेक्स प्रपोज’ गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मैले तिमीलाई घुमाउछु विदेश भ्रमण गराउँछु, मलाई के फाइदा हुन्छ ?’ उहाँले यसो भनेपछि म मेरो पेसागत मर्यादा भन्दा बाहीर नजाने बताएँ । उहाँले म्यासेजबाट प्रपोज गरिरहनु भयो । मैले अस्वीकार गरिरहे । त्यसपछि उहाँले मेरो मलेसिया भ्रमण कटाएर अरुलाई नै थप्नु भयो भन्ने सुनेकी छु ।
पेशागत मर्यादा विपरित कार्य
सन्ध्या थापा,चलचित्र पत्रकार
चलचित्र पत्रकार‘कास्टीङ काउच’ नेपाली सिनेमा क्षेत्रका लागि नयाँ विषय नै हो । पुरुष नियन्त्रित यस क्षेत्रमा महिलालाई ‘भोग्या’ ठान्ने प्रवृतिबाट ‘कास्टीङ काउच’ जन्मिएको हो । एकातीर आफूलाई कुनै कोणबाट ननिखारीकन यस उद्योगमा पस्ने महिला कलाकारहरू र अर्कातिर यस्तैमा जाल थापेर बस्ने केही पुरुषहरूका कारण सीने क्षेत्र बदनाम समेत भएको छ ।
पछिल्लो सयममा नेपाली नायिकाहरू पनि यस विषयमा क्रमश खुल्ने क्रममा छन् । यदि उनीहरू यसैगरी खुल्दै गए भने यो समस्या पनि कम हुँदै जानेछ । नायिकाहरूले पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा आवश्यक सीप र कौशलतासहित प्रवेश गर्नु आवश्यक छ । सँगसँगै उनीहरूमा ढृढ इच्छा शक्ति र पेसाप्रतिको सम्मान पनि अन्तरहृदय देखी नै आउनु पर्छ ।
पेशागत रुपमा नवप्रवेशीहरूलाई विभिन्न र दवाव र प्रलोभनमा पारेर आफ्नो यौन सन्तुष्टीको लागि प्रयोग गर्नु पेशागत मर्यादा विपरित कार्य हो । यस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ ।
‘काष्टीङ काउच’ गर्नेहरूलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ
दुनियाँका कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हुन्छन् । चलचित्र उद्योगमा पनि सबै राम्रा मान्छे छन् भन्ने होइन । केही नराम्रा मान्छेका कारण यो उद्योग पनि प्रताडीत छन् ।
सीने क्षेत्र हल्लाको व्यापार गर्ने क्षेत्र पनि हो । यसैले कति कुरा हल्लाको भरमा बाहिर आउँछन् । तर, यसो भनिरहँदा यस क्षेत्रमा महिला कलाकारहरू पीडित छैनन् भन्ने होइन । यहाँ पनि असल र खराब मान्छेहरूको संलग्नता छ । ‘कास्टीङ काउच’मा यस्तै खराब मान्छेहरूको संलग्नता छ । यसमा फिल्म निर्माता र निर्देशक मात्रै दोषी छैनन् । सम्मानित पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले नराम्रो काम गर्न नहुने हो । सँग सगै यसै क्षेत्रमा भाग्य र भविष्य खोज्ने महिला कलाकार पनि अलि सशक्त बनेर पढेर तालिम गरेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्ने हो । यस्तो नहुँदा ‘यौन’ को बाटो अपनाएर स्थापित हुने सोँच एकातिर महिला कलाकारमा रहेको छ भने अर्कातिर केही शक्तिशाली पुरुषहरूले यसबाट नकारात्मक फाइदा उठाएका छन् ।
मेरो मान्यता भने पवित्र क्षेत्रमा आएर दुस्कर्ममा संलग्न जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने हो । हामी लाखौं मानिसलाई शिक्षा र मनोसञ्जन प्रदान गर्नेहरू आफू स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ । यस्ता अस्वस्थ कर्म गरेर पेशाको बदनाम गर्नेहरूलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ ।